I-Android iyaqhubeka ingathinteleki, i-88% yesabelo sentengiso yeyakho | Iindaba zeGajethi
I-Android iyaqhubeka ingathinteleki, iipesenti ezingama-88 zesabelo sentengiso sesakho
Zininzi ngakumbi nangakumbi ii-mobiles, ke, eneneni kukho ngakumbi nangakumbi ii-mobiles ze-Android. Inkqubo yokusebenza yasimahla yenkampani "Musa ukuba mbi" iyaqhubeka nokunyuka kwizikhundla, okwangoku sele inama-88% esabelo sentengiso sehlabathi kwintengiso yefowuni ephathekayo. Izizathu zicacile, ukunyuka kwezixhobo ezisezantsi kunye nephakathi kunye nokwenzeka okukhulu kwenkqubo yokusebenza, ngaphandle kwento yokuba ukusebenza kwayo akunqweneleki kuxhomekeke kuhlobo luni lwezixhobo zekhompyutha. UGoogle uhlala kwaye uzakuqhubeka ukuba yinkokheli kwiinkqubo ezisebenzayo zokuhamba ixesha elide, ubuncinci amanani athi.
Iintshaba ze-Android ziyawa, yile ndlela, ngayo ukuba abanye banyuke, abanye kufuneka behle. Kwizixhobo ezingama-375 ezigidi zeefowuni ezithengisiweyo (idatha evela Uhlalutyo lwesicwangciso), akukho ngaphantsi kwezigidi ezingama-328 eziqhuba inkqubo yokusebenza ye-Android, oko kukuthi ukwanda nge-10% kunonyaka ophelileyo, ngaphezulu kakhulu kunokuba sinokucinga. Kubonakala ngathi uhlaziyo kunye nokukhula kwezixhobo zokusebenza kuzinzisa inkqubo yokusebenza egxekwayo amaxesha amaninzi ngenxa yokunqongophala kobufanasini.
Ngale ndlela, i-Android iveza ukukhula nge-10,3% kwisabelo sentengiso sehlabathi, ngelixa i-iOS (inkqubo yokusebenza ye-iPhone) iwile nge-5,2%, kwaye ezinye iinkqubo zokusebenza ezinje ngeBlackBerry kunye neWindows Mobile azenzi njalo. kufanelekile ukuba ukhankanye (Windows Ifowuni iphumle ngoxolo). Ngele ndlela, Ulwabiwo ngqo ngama-87,5% kwimarike ye-Android, i-12,1% yentengiso ye-iOS kunye ne-0,3% yeenkqubo ezisaleleyo. Kunyaka ophelileyo, ngomhla omnye, i-84,1% yaziswa nge-Android kunye ne-13,6% ye-iOS.
Kwimeko yezopolitiko, Kubonakala ngathi "bipartisanship" xa kufikwa kwiisistim ezisebenza ngeselula ziyabonakala. Nangona kunjalo, kufuneka sikhumbule ukuba kwisiphelo esiphakamileyo, i-iPhone yinkokeli engenakuphikiswa, ngenxa yoko uninzi lwenxalenye yepesenti kungenxa yezixhobo ezisezantsi neziphakathi, uninzi lwazo olugcwele kwintengiso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-Android iyaqhubeka ingathinteleki, iipesenti ezingama-88 zesabelo sentengiso sesakho
Kwaye amandla okuthenga aya ezantsi
I-Instapaper ishiya inkqubo yobhaliso ehlawulelweyo kwaye isimahla
Le yiHuawei Mate 9, isiphelo esitsha senkampani yaseAsia